G2VP: Lacagaha I iyo II
Mawduuca: Beeraha, Gaadiidka Nadiif ah, Tamarta La cusboonaysiin karo, Farsamada
Isku-dubarida "wacyigalinta wacyigalinta," G2VP waxay ku maalgashaa warshadaha caalamiga ah ee isbedel ku yimid tiknoolajiyadda sida gaadiidka, tamarta, beeraha, warshadaha iyo saadka. G2VP waxay ogtahay in mustaqbalkeena uu aad uga duwan yahay waqtigan xaadirka ah shakhsiyaadka ay wadaagaan gawaarida, iibsadaan koronto la cusboonaysiin karo iyo wax soo saarka siyaabo cusub.
Maalgashadaan waxay kor u qaadeysaa McKnight si ay u noqoto maal-gashi - maalgelin shirkado yaryar, kuwa cusub oo leh awood ay ku badalaan warshad iyada oo adeegsanaysa waxtarka khayraadka. Miisaaniyadan khatarta sare leh waxay ku guulaystaan in ay qaataan hal ama laba cirbadood oo "cirbado" guulaysata oo ka yimaada "hanti" oo ah fikrado rajo leh.
Soo Celinta Lacagta: Waqtiga hore si loo qiimeeyo; dhaqaaluhu wuxuu ku jiraa wajiga.
Saameynta Bulshada & Deegaanka: Iskuday, waa shirkad tafaftiran oo keenaysa dabacsanaanta Uber si loo qaado. Boqolkiiba lixaad oo Maraykan ah ayaa u wadata inay shaqeeyaan. Barnaamijka "Scoop" wuxuu abuuraa amaan, qaali ah oo aan loo baahneyn oo loogu talagalay shaqaalaha iyo dariska kuwaas oo yareeya wakhti ka dhaca jahwareerka gawaarida iyada oo la xafidayo shakhsiyaadka lacag ee baarkinka, gaaska, iyo xirashada iyo jeexista baabuurta. Waxa kale oo ay yareysaa gaaska aqalka dhirta qorraxda laga soo saaro gawaarida, taasoo horseed u ah isbedelka cimilada ee Maraykanka.
Xuquuqda Sawirka: Proterra